Diepsloot_xhosa - Amanda.mobi isiXhosa
Masingavumeli abantwana batshone emanzini: Makwakhiwe ibhulorho yeenyawo eDiepsloot
100 i-signatures required
Usapho oluselutsha lwase Diepsloot lulahlekelwe yintombazana yalo encinci egama layo lingu Angel osweleke ezama ukuwela umfula esiya esikolweni ecangcatha ematyeni. Umzinjana wakhe ufunyenwe emva kweentsuku emke nalo mfula. Asikwazi ukuvumela oku kwenzeke emva kweminyaka engama -22 e-Demokhrasi, Ngokubambisana singafaka uxinzelelo kuMaspala wase Diepsloot ukuqinisekisa ukuba wakha ibhulorho yabo bahamba ngeenyawo khon’ukuze abantwana noluntu lwase Diepsloot bakwazi ukuwela bekhuselekile.
Sodolophu Tau obekekileyo kunye namalungu ka-Masipala ase City of Joburg
Sicela ukuba nakhe ibhulorho yeenyawo ehamba phezu kwalo mfula uAngel Sibanda aswelekele kuwo yase Diepsloot ngaphambi kokuphela kwexesha enilibekelweyo lokulawula.
Yima noMama ka Angel kunye namakhulu-khulu amalungu e-amandla. mobi ekuceleni uSodolophu we City of Joburg uMnumzana Parks Tau ukuba akhe ngokukhawulezileyo ibhulorho yabahamba ngeenyawo njengesikhumbuzo sentombazanana uAngel. Ngokubambisana singaqinisekisa ukuba akuphindi kusweleke namnye kubantwana bethu ngendlela engena-msebenzi.